China Synthetic Pyrethroid Insecticide Pyrethroid Imiprothrin mpanamboatra sy mpamatsy | Senton
Synthetic Pyrethroid bibikely Pyrethroid Imiprothrin
Anaran'ny vokatra： Imiprothrin
CAS tsia .:72963-72-5
Lanjan'ny Formula:318,37 g · mol
Formula Molekular： C17H22N2O4
Panarana roduct: Imiprothrin
Famokarana: 1000tona / taona
Kaody HS: 29339990012
Pyrethroid Imiprothrin dia pyrethroid Famonoana bibikely. Izy io dia singa iray amin'ny mpivarotra sy ny mpanjifa sasanyfamonoana bibikelyvokatra ho an'ny fampiasana anaty trano. Izany dia Tsy misy fiankinan-doha amin'ny biby mampinono, fa afaka effectiy to lalitra mifehy. Izy io dia mandaitra amin'ny kalalao, alika anaty rano, vitsika, trondro volafotsy, hazokely ary hala, ankoatry ny hafa.
Ity karazana ity fanafody famonoana bibikely kafa tsy mandaitra amin'ny Fahasalamam-bahoaka.Tsy azo ravana ao anaty rano, mety levona amin'ny solvent organika toy ny acétone, xylene ary methanol. Afaka mijanona ho kalitao tsara mandritra ny 2 taona amin'ny mari-pana mahazatra. Raha mbola miasa io vokatra io izahay dia mbola miasa amin'ny vokatra hafa ny orinasanay, toy ny moka Famonoan-tena, Moka, Mpanelanelana simika ara-pahasalamana, bibikely voajanahary, Famafazana bibikely SY sns. Ny orinasanay dia orinasam-barotra iraisam-pirenena matihanina, afaka manome anao vokatra sy serivisy kalitao izahay.
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy bibikely Pyrethroid Imiprothrin? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay hanampiana anao hamorona. Ny bibikely pyrethroid synthetic rehetra dia azo antoka ny kalitao. Izahay dia China Factory Factory an'ny kalitao avo Pyrethroid Imiprothrin. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Ho an'ny avo lenta Pyrethroid Imiprothrin
Mahomby amin'ny bibikely akoho amam-borona sasany
Bibikely famonoana bibikely azamethiphos sy biby
Kilalaon-dranomasina hala Cockroaches Azamethiphos
Kintana tsara manidina Azamethiphos